ပန်ဒိုရာ: ပန်ဒိုရာကို ရိုက်ချိုးခြင်း
ရိုက်မချိုးပါနဲ့ဦး ... ချစ်မမပန် ။
I like so much in this paragraph Ma Pan. This is very meaningful paragraph.
ကဗျာ ကောင်ကြီးကို မရှောင်ရင် ဝင်တိုက်သွားမှာလားဗျ။
ကဗျာထဲမှာ ကျနော့်အတွက် ဖတ်ရတာ အပင်ပန်းဆုံးက မော်ဒန်ကဗျာပဲ။ ဒါပေမယ့် မမလေး ရေးတာဆိုတော့လည်း ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးပြီးတော့ ကြိုးစားဖတ်ရတာပေါ့လေ။
ရိုက်ချိုးပေမယ့် မကျိုးဘူး မဟုတ်လား ပန်ပန် …
ညွတ်ရုံပဲ ညွတ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ကဗျာကောင်အများစုက ထိလွယ်ရှလွယ် အကဲဆတ်ကြပေမဲ့
ပျော့ပြောင်းတဲ့ ပန်ဒိုရာကတော့ အဲလို မဟုတ်ဖူးလို့ သိနေပါတယ်။
ဂျစ်.. ရတော့ဘူး ချိုးမှာပဲ ဟဲဟဲ။
ကိုဆောင်းယွန်းလ၊ မိုးချစ်သူ၊ မင်းတစေ ၊ကိုစေးထူး Chaos။ ကျေးဇူးပါနော်။
ကောင်းကင်ကို။ ဟုတ်တယ် ၀င်တိုက်မှာ။
မမေ၊ သိနေသူနဲ့ကျတော့လည်း ခက်တာပဲနော်။ ဟဲ။